Inorova Solo3 uye Powerbeats3 Wireless nemavara matsva muPop Collection | Ndinobva mac
Nhau dzaitarisirwa kubva kuBeats panguva yeWWDC 2018 yakaitwa munaJune 4. Runyerekupe rwakanongedzera kuna mutauri akangwara, yakavakirwa zvakare kuna Siri asi nemutengo wakaderera pane iyo HomePod, iyo chaiyo Apple modhi. Zvisinei, mazuva pamberi pe Inorova Makumi Gumi Unganidzo, yakaganhurirwa vhezheni yeBeats yese nemhuri yaDr Dre iyo yairangarira makore gumi ekutanga ekutanga kwayo.
Uye kuti irege kuwira mukukanganikwa, maviri mamodheru kubva kune inozivikanwa headphone katarogu inosvika mune mivara mitsva uye pasi peunganidzwa "Pop Kuunganidzwa". Mhando dzakasarudzwa ndedze: Inorova Solo3 uye Powerbeats3 Wireless. Ivo vanouya nemavara mana akasiyana uye mitengo icharamba ichigara pa € ​​299,95 yeBeats Solo3 Wireless uye Powerbeats3 Wireless pa € ​​199,95.
Makumi mana ndeaya manyowani anosvika mune ino Pop Unganidzo: Indigo Pop (musanganiswa webhuruu uye lime green), Pop Bhuruu (mubatanidzwa wemumvuri miviri yebhuruu); Pop Violet (miviri miviri yeViolet) uye Pop Magenta (yakapetwa kaviri magenta). Sezvatakambotaura, mitengo icharamba yakafanana neyakajairika vhezheni uye yakafanana neyeMakumi emakore Unganidzo.
Zvakare, sezvaunonyatso ziva, ese maBeats Solo3 Wireless uye nePowerbeats3 Wireless anouya aine anodzivirira anotakura kesi. Izvi ivo zvakare vanozogamuchira mavara eiyo nyowani nyowani Beats Pop Unganidzo. Saizvozvowo, uye sezvaungaona muchinyorwa chino, Apple neBeats vatangisa vhidhiyo paYouTube umo kuunganidzwa kutsva kunoziviswa uye chiziviso ichi chinofambisirwa neMNEK nyowani (Ruvara) kuburitswa kwaungatoteerera paApple Music.
Chekupedzisira, ndikuudze kuti iyi yese Pop Collection yave kuwanikwa muApple online chitoro. Ehe, sezvatinogona kuona mairi, yekutanga kuburitswa iri pakati pevhiki dzaJune 25 naJuly 2.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Inorova Solo3 uye Powerbeats3 Wireless nemavara matsva muPop Collection
Safari inopa rutsigiro rwemafavicon ne macOS Mojave